Chengetedza Mvura-Nhau-FengQiu Group Co, Ltd.
Mvura ndiyo tsime rehupenyu, iyo kiyi yekugadzirwa, uye nheyo yeecology. Ndihwo hwaro hwekupona nekusimudzira kwenharaunda yevanhu. Kuchengetedza kushandiswa kwemidziyo yemvura uye kuchengetedza zviwanikwa zvemvura ibasa uye chisungo chemugari wese. Nekusimbisa chete kuvaka kwenzvimbo inochengetedza mvura nekunyatsogadzira kugadzirwa kwesainzi nekuchengetedza mvura uye mararamiro munharaunda yese tinogona kuona kushandiswa kwakasimba kwemidziyo yemvura. Mukubatana nemamiriro chaiwo ekambani yedu, nzira dzinotevera dzekuchengetedza mvura dzinokurudzirwa:
1. Simbisai kusimudzirwa kwekuchengetedza mvura, kuitira kuti kuziva kwekuchengetedza mvura kwakadzika midzi mumwoyo yevanhu. Wese munhu anogadzira pfungwa ye "kuponesa kubwinya, kunyara uye kunyara", kutanga kubva pamunhu neumwe, kutanga kubva kwandiri, kutanga kubva pazvinhu zvidiki, kukura Mamiriro akanaka ekuchengetedza mvura anoumba mamiriro akanaka ekunze emvura ine rudo, mvura uye mvura, uye kutarisa mumwe nemumwe kuchengetedza pamwe nekushandisa zviwanikwa zvemvura.
2. Vashandi vese vanofanirwa kukwidziridza kuziva kwavo kuchengetedza mvura, kudzidza nemazvo ruzivo rwekuponesa mvura, kusimudzira nzira dzekuchenesa mvura, kushandisa midziyo yekuchengetedza mvura, kuomerera pakushandisa mvura, kukoshesa donhwe rega rega remvura, uye kurwisa kuve muenzaniso uye musimudzi wesainzi. kuchengetedzwa kwemvura.
3. Simbisa kuchengetedza kwemazuva ese uye manejimendi enzvimbo dzemvura nemidziyo, gumisa ku “mhanya uye kudonha”, shingairira kuita basa rekuchengetedza mvura, uye shandisa midziyo yekuchengetedza mvura kuti uvandudze mashandisiro emvura. Iyo nzvimbo yakasvibira yeyuniti inotora nzira dzekuchengetera mvura-sekudiridza, sekudiridzira, zvidiki-kudiridza uye kudiridza.
4. Shingairira kusimudzira uye shandisa matsva ekuchengetedza mvura, matekinoroji matsva, nemidziyo mitsva, shandura hunyanzvi hwekushandisa mvura, kugadzirisa mvura zvakare, uye kuchengetedza mvura uye kuderedza kubuda.
Kuponesa ndiyo hunhu hwechinyakare cherudzi rweChinese, uye kuchengetedza mvura kunoda kushanda kwakabatana kwenharaunda yese. Kuchengetedza uye kuchengetedza zviwanikwa zvemvura, kutanga kubva kwandiri, kutanga kubva zvino, munhu wese ari kuita tsika yekuchengetedza mvura, munhu wese anozvipira kusimudzira kuchengetedza mvura, rega mvura yehupenyu ifambe.
Yepfuura: WEFTEC RATIDZA 2019